ပရိတ်သတ် တွေ ရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ခံနေရတာ တောင် ဂရုမစိုက်ပဲ ခရီးသွားပုံရိပ်တွေ တောက်လျှောက်တင်နေတဲ့ “ယဉ်လတ်” – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ပရိတ်သတ် တွေ ရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ခံနေရတာ တောင် ဂရုမစိုက်ပဲ ခရီးသွားပုံရိပ်တွေ တောက်လျှောက်တင်နေတဲ့ “ယဉ်လတ်”
ပရိတ်သတ် တွေ ရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ခံနေရတာ တောင် ဂရုမစိုက်ပဲ ခရီးသွားပုံရိပ်တွေ တောက်လျှောက်တင်နေတဲ့ “ယဉ်လတ်”
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ် ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါ တယ်နော်။ နွေဦးတော်လှန်ရေး မှာလည်း လုံးဝမပါဝင်ပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ပရိသတ်တွေ ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန်နေပါပစေ လုံးဝကို မတုံ့ပြန်ပဲအေးဆေးစွာ နဲ့နေနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ယဉ်လတ်ဟာ ဆိုရင် စစ်တပ်ထောက်ခံသူ အနေနဲ့တင် မဟုတ်ဘဲ MWD ချန်နယ်အတွက် အစီအစဉ်တစ်ခု ရိုက်ကူ းထားပါသေးတယ်နော်။ သူတင်တဲ့ပုံတွေ အောက်မှာလည်း ပရိသတ်တွေက ဝိုင်းပြီး ပြောထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောနေပါပစေ ယဉ်လတ် ကတော့ လုံးဝကို ဂရုမစိုက် ပါဘူးတဲ့နော်။
“ရေငုပ်တဲ့အတွေ့ကြုံတွေ .. ကျောက်တောင်ပေါ် တွယ်တက် ခဲ့တာတွေ သင်ယူ ရရှိခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတတွေ ဟာ အဖိုးမဖြတ်နိုင် တဲ့ ဘဝအတွေ့ကြုံတွေပါပဲ . .ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် အခက်ခဲတွေ အကောင်းအဆိုးတွေတစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ အတူတူဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေဟာလည်း တစ်သက်လုံး သတိရစရာတွေ ဖြစ်နေမှာပါ ..#SoulHealing #Dive ..🌊🦋⚓️🤿🐠🐬#Adventure & Survive ! Beinga#diver forawhile ..🌊⚓️🤿🗺 .. #Life #experience #YinLet #ယဉ်လက်#YL” လို့ သူ့ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် တင်ထား ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
CreditးCelelucky
Previous post ပုရိသတွေ ကြွေသွား စေလောက် အောင် အလှလွန်း နေတဲ့ ချောကလျာ
Next post မခို့တရို့ အမူ အယာလေး နဲ့ ဆွဲဆောင် မှု ရှိနေ တဲ့ L-လစ်ရှား